Hein Myat, Author at Lifestyle Myanmar
အလုပ်ထဲမှာ ဝေလေလေလုပ်နေဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပီပြင်စွာလုပ်ပါ။ Productive ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ မပင်ပန်းဘဲ ရုံးခန်းထဲထိုင်ပြီး လက်ပ်တော့လေး၊ ကွန်ပျူတာလေးနဲ့ အဲကွန်းခန်းထဲ သက်သောင့်သက်သာအလုပ်လုပ်ရပေမယ့် လူတိုင်း၊ လူတိုင်းမှာတော့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖိအားဆိုတာရှိစမြဲပါ။ တချို့ကျ...
အခြေအနေဆိုးနေတဲ့ RS ကို ကြိုးစားပြီးရှေ့ဆက်နေတဲ့သူတွေရဲ့ အကြောင်းပြချက် (၇) ချက်
ဘယ်လောက်ပဲ အခြေအနေဆိုးနေပါစေ၊ သင်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူကို စွန့်ခွာဖို့ သတ္တိမရှိတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ RS ကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ ကြောက်ရွံ့နေတတ်ပါတယ်။ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့။ နာကျင်စရာတွေ၊ မျက်ရည်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ RS တစ်ခုက ရှေ့ဆက်ဖို့ အရမ်းကိုခက်ခဲတာပေါ့။ ပြောလိုက်သမျှစကားတိုင်းက ပြဿနာတွေဆီ ဦးတည်သွားပြီး...
ဒါပေမယ့် မနက်ခင်းနိုးထထချင်း သင့်ရဲ့အပြုအမူတစ်ခုက သင့်ကိုဝိတ်ကျစေတယ်ဆိုရင် ယုံမလား??? ဒါဆို ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ နည်းနည်းလေးအဆီများနေတဲ့သူ၊ နည်းနည်းလေးဗိုက်ထွက်နေတဲ့သူတိုင်းရဲ့အိပ်မက်က အဆီကျဖို့၊ ဝိတ်ကျဖို့ပါ။ တချို့ကျတော့လည်း အစားလျှော့စားတယ်၊ တချို့ကျတော့လည်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ကြတယ်၊ အစရှိသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်နည်း ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့်...
စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းက အကောင်းမမြင်တတ်တာကြောင့်ပါ။ တစ်ချိန်လုံး မကောင်းမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ သင်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေအောက်မှာပဲ ရောက်နေမှာပေါ့။ လူတိုင်းက သူ့ဟာနဲ့သူ စိတ်ဖိစီးနေတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ အလုပ်ကြောင့်၊ ကျောင်းစာတွေကြောင့်၊ အခြားသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့် အစရှိသဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေအရမ်းများလာရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တယ်လေ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ...
အနက်ရောင်ကြိုက်သူတို့ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
အနက်ရောင်ချစ်သူတွေက သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကို စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ အကောင်းဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပြီး ဒီအတွက်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မမှီခို အားမကိုးကြပါဘူး။ အနက်မှအနက်၊ အင်္ကျီဝယ်လည်း အနက်၊ ဘောင်းဘီဝယ်လည်း အနက်၊ ဘာပဲဝယ်ဝယ် အနက်တစ်လိုင်းသွားနေတဲ့သူတွေ သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းထဲမှာရှိမှာ သေချာပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ရော အနက်ရောင်ကြိုက်သူတစ်ယောက်လား ???...